ရီးယဲလ်အသင်း ဒီနွေရာသီမှာ မဖြစ်မနေ ကစားသမားသစ် ခေါ်ဖို့လိုနေပြီ
ဥရောပစူပါဖလား ရှုံးပွဲက ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူဖို့ ရီးယဲလ်အတွက် သတိပေးခေါင်းလောင်းသံလား
16 Aug 2018 . 4:37 PM
ဒီနွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာ အဓိက ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် ရီးယဲလ်အသင်းဥက္ကဌ ဖလော်ရင်တီနိုပီရက်ဇ် Florentino Perez က ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူစရာ မလိုဘူးဆိုပြီး ခေါင်းမာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ ပီရက်ဇ်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ရှိနေပြီ။ ဥရောပစူပါဖလားပွဲမှာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုအသင်းကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် ရီးယဲလ်အသင်း အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲကို မဖြစ်မနေ၀င်ဖို့ ဖိအားများလာခဲ့တယ်။
အခုလောလောဆယ် ရီးယဲလ်မှာ လိုအပ်နေတာက ကမ္ဘာ့အဆင့် တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ နောက်ခံလူ တစ်ဦးပါပဲ။ ရီးယဲလ်နည်းပြသစ် လိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui ကတော့ တိုက်စစ်ထက် ခံစစ်ပိုင်းကို ပိုပြီး စိုးရိမ်နေတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် ၀ါရင့်နောက်ခံလူ ရာမို့စ် Ramos ရဲ့ခြေစွမ်းက အကျဘက်ကို ရောက်လာချိန်မှာ သူ့ရဲ့တွဲဖက်ကစားသမားတွေပါ တိုင်ပတ်တော့တာပါပဲ။ အဲဒါကို အက်သလက်တီကိုနဲ့ပွဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
ပွဲအစ(၄၉)စက္ကန့်မှာ ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးက ဒီယေဂိုကော်စတာ Diego Costa ကို ရာမို့စ်ရော၊ ဗာရန်း Varane ပါ မထိန်းနိုင်ခဲ့လို့ ပေးခဲ့ရတာ။ ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့ နောက်ထပ် ချေပဂိုးမှာလည်း ရီးယဲလ်ခံစစ် အမှားမကင်းခဲ့ဘူး။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုက ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း တစ်ရာသီကို ဂိုး(၅၀)လောက်သွင်းခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို ကစားသမားနေရာမှာ ဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကိုနဲ့ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale နဲ့ ဘန်ဇီမာ Benzema တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်သာ ဒဏ်ရာရခဲ့ရင် အစားထိုးမယ့်သူက ဘယ်သူလဲ။
အခုလောလောဆယ် ပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် ပိတ်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့် လာလီဂါက သြဂုတ်(၃၁)ရက်မှ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ ရီးယဲလ်အသင်း ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်ချိန်ရပါသေးတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရီးယဲလ်အသင်း မဖြစ်မနေ ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ လိုနေပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .
Photo:The Mercury,Viralcast,Madridista News
ဥရောပစူပါဖလား ရှုံးပှဲက ကစားသမားသဈချေါယူဖို့ ရီးယဲလျအတှကျ သတိပေးခေါငျးလောငျးသံလား
ဒီနှရောသီဈေးကှကျအတှငျးမှာ အဓိက ကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကို လကျလှတျခဲ့ရပမေယျ့ ရီးယဲလျအသငျးဥက်ကဌ ဖလျောရငျတီနိုပီရကျဇျ Florentino Perez က ကစားသမားသဈ ချေါယူစရာ မလိုဘူးဆိုပွီး ခေါငျးမာခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ပီရကျဇျတဈယောကျ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြကို ပွောငျးလဲဖို့ရှိနပွေီ။ ဥရောပစူပါဖလားပှဲမှာ မွို့ခံပွိုငျဘကျ အကျသလကျတီကိုအသငျးကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ ရီးယဲလျအသငျး အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျထဲကို မဖွဈမနဝေငျဖို့ ဖိအားမြားလာခဲ့တယျ။
အခုလောလောဆယျ ရီးယဲလျမှာ လိုအပျနတောက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ တိုကျစဈကစားသမားတဈဦးနဲ့ နောကျခံလူ တဈဦးပါပဲ။ ရီးယဲလျနညျးပွသဈ လိုပယျတကျဂီ Lopetegui ကတော့ တိုကျစဈထကျ ခံစဈပိုငျးကို ပိုပွီး စိုးရိမျနတေယျ။ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဝါရငျ့နောကျခံလူ ရာမို့ဈ Ramos ရဲ့ခွစှေမျးက အကဘြကျကို ရောကျလာခြိနျမှာ သူ့ရဲ့တှဲဖကျကစားသမားတှပေါ တိုငျပတျတော့တာပါပဲ။ အဲဒါကို အကျသလကျတီကိုနဲ့ပှဲမှာ ထငျထငျရှားရှားကွီးကို တှလေို့ကျရတယျ။
ပှဲအစ(၄၉)စက်ကနျ့မှာ ပေးလိုကျရတဲ့ဂိုးက ဒီယဂေိုကျောစတာ Diego Costa ကို ရာမို့ဈရော၊ ဗာရနျး Varane ပါ မထိနျးနိုငျခဲ့လို့ ပေးခဲ့ရတာ။ ဒီယဂေိုကျောစတာရဲ့ နောကျထပျ ခပြေဂိုးမှာလညျး ရီးယဲလျခံစဈ အမှားမကငျးခဲ့ဘူး။ နောကျပွဿနာတဈခုက ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး တဈရာသီကို ဂိုး(၅၀)လောကျသှငျးခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုလို ကစားသမားနရောမှာ ဘယျသူနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အကျသလကျတီကိုနဲ့ပှဲမှာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale နဲ့ ဘနျဇီမာ Benzema တို့က ဦးဆောငျခဲ့ပွီး နှဈယောကျစလုံး အကောငျးဆုံးကစားနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့နှဈယောကျထဲက တဈယောကျသာ ဒဏျရာရခဲ့ရငျ အစားထိုးမယျ့သူက ဘယျသူလဲ။
အခုလောလောဆယျ ပရီးမီးယားလိဂျကတော့ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ ပိတျသှားပွီဖွဈပမေယျ့ လာလီဂါက သွဂုတျ(၃၁)ရကျမှ ကုနျဆုံးမှာဖွဈလို့ ရီးယဲလျအသငျး ကစားသမားသဈချေါယူဖို့ ပွငျဆငျခြိနျရပါသေးတယျ။ အောငျမွငျမှုတှကေို ဆကျလကျ ထိနျးသိမျးထားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ရီးယဲလျအသငျး မဖွဈမနေ ကစားသမားသဈ ချေါယူအားဖွညျ့ဖို့ လိုနပွေီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .